Isicelo - WY Precision Co. Ltd
ngezikhonkwane ibhola ezisetyenziswa ukutya neziselo, mveliso esizisebenzelayo, izixhobo mveliso, isixhobo umatshini, amashishini zonyango kunye semiconductor kuzuza yokusebenza ngezikhonkwane ibhola ngqo-phantsi.
Iinkqubo Factory esizisebenzelayo izicelo ukudibanisa WY Precision ziquka: Iirobhothi, iteknoloji uMondli, isilawuli esizisebenzelayo Ukukhupha, izicelo Laser processing, iinkqubo esizisebenzelayo Industrial, Ukuhlolwa neenkqubo zovavanyo, bekwilift, iinkqubo ibandla Esizenzekelayo kunye namaqonga Safety.
Kwimarike izithuthi, iimoto hybrid ezintsha eziliqela kunye iinjini ngesifo amafutha eliphantsi kunye nemisi asezantsi ziye zaphuhliswa ukuze kuncitshiswe ukukhutshwa CO2 ukuze indawo yabo zeemoto. Kwangaxeshanye, iiprojekthi ezininzi lwenzelwe ukuphumeza aluncedo imoto enkulu yokuqhuba iphephe ngokusebenzisa drives injini yombane ngokukhawuleza noluthembekileyo kusetyenziswa ngezikhonkwane ibhola
izixhobo Testing ukudibanisa iimveliso motion yomgama kuquka izixhobo semiconductor, Amalungu ukuba oomatshini semiconductor lemveliso, semiconductor indibano kunye neepakethe noomatshini kunye nesonkana esisicaba yokuphatha.
Ukulawula isindululo yomgama yimfuno eliqhelekileyo bezixhobo zonyango kunye nezixhobo elebhu, kwaye kukho ezininzi iinketho yomgama drive ezikhoyo. Nangona kunjalo, uhlobo lonyango / izicelo laboratory ebonisa imingeni ekhethekileyo, ezifana nokuqinisekisa ngqo, ethembekileyo, kunye nentshukumo repeatable; yokuphatha engafani imithwalo ezinamandla ngaphakathi izithuba kuya ezincinane; ezisebenza ezindaweni acocekileyo ezifuna imali engephi zokuguga kobutyobo; nokunciphisa ingxolo, ukungcangcazela, nophazamiseko mechanical ukuba lezixhobo ngexesha lokusebenza.